Home Maninona no misy ny zavamisy momba izany
Ho an'ireo mpankafy Football, ny famakiana momba ny Biography an'ny mpilalao baolina kitra dia matetika misy fitaomana, manentana ary manome fampaherezana. Io no antony mahatonga ny zava-misy momba ny Football Untold Biography antsika !!
Fantatry ny baolina kitra fa mety tsy ho lany tamingana ihany izy io. Na dia nivoatra tao anatin'ny taona maro aza ny fomba nampanaovina ny lalao, ny tantara mahaliana izay tsy najanony hamokatra dia miverimberina ao amin'ny fahatsiarovana ny lalao afrikana aficionados ho an'ny taranaka maro.
Ny tantara izay mihodikodina ny mpilalao, ny mpitantana ary ny mazotoana amin'ny fanatanjahantena dia mitsikitsoka, mampihetsi-po, mampieritreritra ary mazava ho azy, misy dikany tsara izay azon'ny mpamaky, ny mpihaino sy ny mpijery hamaritana ny fihetseham-po marobe izay napetraka ao an-tsain'izy ireo.
Lifebogger dia manolotra tantara madiodio momba ny mpilalao baolina, mpitantana ary voafidy. Credits sary: ​​LB.
Zava-dehibe iray izay mahatonga ny tantara ho lasa mandainga ny fisian'izy ireo fa tsy mandalo ny mason'ireo sehatra nomerika matihanina toy izany izy ireo Lifebogger izay manome voninahitra ny zavakanto amin'ny haisoratra sy kanto an-tsoratra amin'ny tantaram-piainana mifototra amin'ny baolina kitra.
At Lifebogger, reharehantsika ny tenantsika ho loharanom-pahalalana nomerika matihanina momba ny tantaran'ny baolina kitra marina sy tsy voatanisa izay tafiditra ao anatin'ny tantaram-piainana mahaliana izay asehontsika momba ny mpitantana ny taranja baolina kitra ary elite manerana an'izao tontolo izao.
Lifebogger dia loharanom-peo dizitaly tokana amin'ny tantaran'ny baolina kitra. Sary: LB.
Mampalahelo, ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hanomezana ny mpihaino ny hevitra feno momba ny ataontsika amin'ny fanolorany ny zava-misy momba ny biografia, na mpitantana ary elite eo ambanin'ny lohateny izay manana famoronana mamaky teny.
Nahoana ny tantaran'ny fahazazana - Mpiandraikitra ny Football izay tsy nilalao baolina kitra matihanina
Tsy mitsahatra mitsimoka akory ny Football raha tsy amin'ny finoana sy ny hevitra malaza. Ny iray amin'ireto hevitra ireto dia milaza fa ny olona tsy mbola nilalao baolina kitra matihanina dia tsy afaka - ratsy indrindra - lasa mpitantana baolina kitra na - tsara indrindra - milamina tsara amin'ny fahaiza-mitantana.
Tahaka ny zavatra voalaza etsy ambony dia toa zava-misy ara-tsiansa voamarina, Maurizio Sarri nipoitra avy tamin'ny blues mba hanombohana ny mpanazatra azy tamin'ny 1990 miaraka amin'ny League Club AC Sansovino Andre Villas-Boas nanomboka tamin'ny asan'ny mpanazatra mpanampy tao Porto tamin'ny faran'ny 1990's.
Tsy milalao baolina kitra amin'ny sehatra matihanina i Andre Villas-Boas sy Maurizio Sarri talohan'ny nanombohan'izy ireo ho mpanazatra. Credits sary: ​​WAGNH.
Maninona ny zava-misy momba ny fitantaran'i Untold - Mpilalao baolina kitra izay nanana ady tamin'ny mpitantana
Saika tsy ho vita ny fifaninanana amin'ny fanatanjahantena ekipa, indrindra ny lalao baolina kitra izay misy ny fihetsiky ny mpilalao amin'ny «hafanan'ny fotoana». Na eo aza ny endrika ivelany na fihetsika mamohehatra izay ataon'ireo mpilalao amin'ny mpifanandrina aminy dia esorina amin'ny maha-«fitondran-tena matihanina» azy ireo, tsy azo lazaina ihany koa rehefa maka hafanana amin'ireo mpitantana azy ny mpanao bilaogy baolina kitra.
Ny mpankafy an'i Barcelona dia tsy ho ela hanadino ny fifandirana naharitra teo amin'ny tompon'andraikitra taloha tao amin'ny klioba Pep Guardiola ary mandroso Zlatan Ibrahimovich miaraka amin'ny fitantaran'ity farany fa tsy niresaka taminy indroa tao anatin'ny volana 6 i Guardiola. Nandritra ny fifanolanana sarotra kokoa, ny mpankafy ny Real Madrid no nisaraka teo amin'ny fanohanana Iker Casillas or Jose Mourinho rehefa naharesy ny duo ny zavatra heverin'ny mpanazatra ho famadihana nataon'ny mpiambina Espaniola.
Zlatan Ibrahimovich sy Iker Casillas dia samy nanana ady mangidy naharitra niaraka tamin'ny mpitantana fotoana iray. Credits sary: ​​LB.
Ankoatr'izay, tsy maro no mahatadidy an'izany David Beckham's ny fiheverana tafahoatra tamin'ny Manchester United indray mandeha no nitarika ny mpanazatra tamin'izany Alex Furgeson hanosika kiraro amin'ny superstar. Ny kiraro tongotra dia namely an'i Beckham teo amin'ny tarehiny, tranga iray izay nanakorontana ny diany taty aoriana tany Real Madrid any 2003.
Maninona ny zava-misy momba ny fitantaran'i Untold - Mpilalao baolina kitra miaraka amin'ny karatra mena indrindra
Avy amin'ny sokajy ity sokajy ity dia avy amin'ireo mpiaro miady an-daharana hatrany amin'ireo mpampihatra amin'ny midfield ary koa mpilalao mahay milay izay manana finiavana amin'ny herisetra ary mampiseho herisetra amin'ny fihantsiana kely. Vokatr'izany dia mahatsiravina ireo rakitsoratra manafintohina izay voamarin'ny litanes karatra mena.
Hanomboka amin'ny fametahana mafy ireo mpiaro, Sergio Ramos ambony ny tabilao rehefa azony ny fandefasana be indrindra amin'ny tantaran'ny La Liga. Na efa misotro ronono aza Steven Gerrad laharana isan'ireo afovoan-jotra mena indrindra karika izay nandia ny tonelina Anfield mba handro.
Steven Gerrard sy Sergio Ramos dia manana ny laharana avo kokoa ao anatin'ny lisitry ny mpilalao mandefa ny mpilalao. Credits sary: ​​LB.
Mifindrafindra toerana isika Diego Costa izay ny mazoto milalao lalao dia tsy mitsahatra mamela azy ao anaty fahasahiranana amin'ireo mpitsara any amin'izay rehetra alehany. Raha ny tena izy, dia hita fa toy ny lozam-pifamoivoizana miandry izy isaky ny manandrana mahazo ny fananana ho an'ireo mpiaro.
Maninona ny zava-misy momba ny fitantaran'i Untold - Mpilalao baolina kitra izay Polyglots
Lavitra amin'ny fampiasam-bola betsaka amin'ny fanazaran-tena mba hifehezana ny kanto tsara tarehy, ny mpilalao sasany dia nandeha kilaometatra fanampiny mba hahafaly ireo mpankafy amin'ny fianarana ny fiteny ao amin'ny vondron'olona mpampiantrano azy. Ny ezaka nataony dia tsy vitan'ny hoe nihanatanjaka kokoa ny tontolon'ny baolina kitra tao amin'ny fiarahamoniny fa nametraka azy ireo ho toerana mahafinaritra eo amin'ny sehatry ny fitantanana rehefa misotro ronono.
Raha tsy misy ado be dia be ireo mpilalao izay mahay fiteny be dia be ny mpiandry Peter Cech izay manampy ny Czech niaviany dia miteny espaniola, Alemanina, frantsay ary anglisy. Andaniny, Henrikh Mkhitaryan miteny malefaka, portogey, frantsay, italiana, rosiana, anglisy ary alemana.
Farany saingy tsy dia kely indrindra Romelu Lukaku izay manaporofo fa izy no endrika tonga lafatra amin'ny "hyperpolyglot satria miteny tsy misy fiteny noho ny fiteny 8. Anisan'izy ireo ny frantsay, Lingala, Dutch, Belzika, Kongoley, Swahili, espaniola, anglisy, portogey ary alemà.
Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan sy Peter Cech dia marika marobe amin'ny baolina kitra. Credits sary: ​​LB.
Maninona ny zava-misy momba ny fitantaran'i Untold - Mpilalao Football sy Mpiasa Mpahazo Izay Nahazo mari-pahaizana ambony amin'ny fampianarana
Ny fomba namantaran'ny sasany ny mpanao sangan'asa baolina kitra, ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny baolina kitra dia tsy manakana ny fahatongavan'ny toerana ambony akademika, foto-kevitra mamokatra izay nahita azy ireo nanoratra anarana ho an'ny anjerimanontolo ary nahazo diplaoma rehefa vita ny programa.
Mpilalao italiana Giorgio Chiellini ambony ny lisitr'ireo nahazo diplaoma tao amin'ny University of Turin miaraka amin'ny Master Degree in Business Administration. Fa Juan Mata, manana dingana roa - ny iray amin'ny marketing ary ny iray amin'ny siansa ara-panatanjahantena - tsy ampy. Manana tombony amin'ny fandalinana Psychology amin'ny fotoana nanoratana izy.
Ao amin'ny sokajy mpitantana, fantatrao ve izany Frank Lampard manana mari-pahaizana amin'ny teny latina Vincent Kompany manana mari-pahaizana mavesatra amin'ny fitantanana orinasa avy amin'ny Alliance Manchester Business School? Eny tokoa, mety tsy nanana laza momba ny faharanitan-tsaina ny mpilalao baolina kitra, saingy ireo mpilalao sy mpitantana voalaza etsy ambony dia nandray anjara betsaka tamin'ny fanovana ny fitantarana.
Tanàna manana talenta. Avy amin'i LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard ary Juan Mata, ireo sary amin'ny alàlan'ny sary: ​​LB.
Maninona ny zava-misy momba ny fitantaran'i Untold - Tompon'ny Club indrindra
Lalao Premier English dia lasa kianja filalaovana an'arivony tapitrisa izay mividy club sy splash vola ankavia, afovoany sy afovoany. Raha ny fahitan'i Eropa azy dia ny tompon'ny klioba manankarena indrindra tamin'ny fotoana nanoratana dia i Sheikh Monsour, ilay lehilahy nividy tanànan'ny Man.
Hihaona amin'i Sheikh Monsour- Ny tompon'ny klioba manankarena indrindra any Angletera. Ny trosa mpiambina & Ind
Asides ho tompon'ny klioba, i Sheikh dia mpanjaka ao Emirati ihany koa izay praiminisitra lefitry ny Emirates Arabo Mitambatra, minisitry ny raharaha filoham-pirenena ary mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka Abu Dhabi. Izy dia rahalahin'ny antsasaky ny filohan'ny UAE, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Taorian'ny manankarena indrindra amin'ny filalaovana baolina dia Joseph Joe Lewis billionaire anglisy tsy malaza malaza izay tompon'ny Spurs.
Joe Lewis (ankavia), tompon'ny Spurs dia iray amin'ireo manankarena indrindra eto Angletera
Ianao dia efa nahare an'i Danial Levy, fa i Joe Lewis no lehilahy ao ambadiky ny Spurs ary ilay nanendry an'i Levy ho filohan'ny klioba.
Farany Roman Abramovich, izay fanta-daza indrindra any ivelan'i Rosia amin'ny maha-tompon'i Chelsea FC Izy dia azo inoana fa ilay lehilahy nanova an'i Chelsea tamin'ny lafiny Premier League ho an'ny goavambe eropeana.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpankafy Chelsea dia any Angletera sy manerantany. Abramovich dia nanaporofo fa azo atao ny mividy fahasambarana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny antony Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.